Maqaallada Isaja Karadovska ee Martech Zone |
Maqaallada by Isaja Karadovska
Isaja Karadakovska waa arday ka qalin-jabisay Pol-Sci, horena u ahaa Cilmi-baadhe Junior, haddana ah TakeATumble's Isuduwaha Mawduuca. Waxay u horseedday inay raadiso oo abuurto wax weyn. Waqtigeeda firaaqada ah waxay u heellan tahay waswaaska dhirta.
Talaado, September 28, 2021 Talaado, September 28, 2021 Isaja Karadovska
Suuqgeynta dhijitaalka ah waa udub dhexaadka ganacsi kasta oo ecommerce ah. Waxaa loo adeegsadaa keenista iibka, kordhinta wacyigelinta sumcadda, iyo gaarsiinta macaamiisha cusub. Si kastaba ha noqotee, suuqa maanta waa mid buuran, oo ganacsiyada e -commerce waa inay si adag u shaqeeyaan si ay u garaacaan tartanka. Kaliya maahan - waa inay sidoo kale la socdaan isbeddellada teknolojiyaddii ugu dambeysay oo ay si habboon u hirgeliyaan farsamooyinka suuqgeynta. Mid ka mid ah hal -abuurnimada teknolojiyad ee ugu dambeysay oo wax ka beddeli karta suuqgeynta dhijitaalka ah waa sirdoonka macmalka ah (AI). Aan aragno sida. Arrimaha Muhiimka Ah Ee Maanta